Miditra amin'ny tsena rehetra ny Instagram hifaninana | Famoronana an-tserasera
Miditra amin'ny tsena rehetra ny Instagram mba hifaninana
Jose Angel | | Nohavaozina tamin'ny 24/06/2018 22:46 | Famolavolana tranonkala, Tambajotra sosialy
Ny Instagram dia manohy manohy mandrakotra gazety amin'ny fanavaozana vaovao. Fanavaozana vaovao izay tsy "Fanamboarana bibikely sy fanatsarana ny fampisehoana" mihitsy, ahoana koa. Ary tato ho ato dia nahare vaovao maro izay hotaterinay eto isika. Azo antoka fa nilaza ireo mpampiasa ny tambajotra fa efa mahafantatra izy ireo satria azon'izy ireo ampiasaina ankehitriny. Saingy tsy ny fanavaozana rehetra no nivoaka ary hitady ny tsena rehetra hifaninanana izy ireo.
Ny tsena izay idiran'ny instagram dia samy hafa be amin'izay namboarina voalohany ity App ity. Ary lavitra ny maha tambajotra sosialy hifandraisany amin'ny olon-kafa, manohana ny hevitry ny fahitalavitra vaovao izy. Fomba fiasa hijerena Ny fahitalavitra IGTV dia manamarina izany, fa tsy te hiala amin'ny mpanaraka izay nanjary nalaza. Rehefa dinihina tokoa, ny mpamorona sy ny tontolon'ny sary "static" dia nanome ny anarany. Ankehitriny ny ireo mpamorona endrika sy mpaka sary dia afaka mivarotra ny vokariny mivantana avy amin'ny fivarotana instagram.
1 Inona ny atao hoe IGTV?
2 Fivarotana vokatra ho an'ny instagram
Inona ny atao hoe IGTV?
Fahitalavitra Instagram tsotra. Raha jerena izany fitarainana rehetra izany avy amin'ireo mpampiasa izay afaka naneho hevitra momba ny 15 segondra fotsiny tao amin'ireo tantara ary iray minitra tao anatin'ny fizotry nipoitra ity fitaovana ity. Ankehitriny ny mpamorona atiny dia afaka mamorona horonantsary mitsangana original toy ny amin'ny YouTube. Ireo horonan-tsary ireo dia haharitra adiny iray ambony indrindra. Zavatra iray izay miharihary fa mifaninana amin'ny tsenan'i YouTube.
Mba hidirana amin'ity asa ity dia nanisy kisary fahitalavitra eo amin'ny ankavanana ambony izy ireo. Any no ahitanao ireo olona arahinao amin'ny 'fantsona' -ny. Raha tsy manana ianao dia manolotra olona natolotra ny Instagram ary raha ny anao dia ianao no te hamorona, amin'ny kodiarana fanovana, kitiho ary 'mamorona fantsona'. Hangataka anao hanaiky ny fitsipiky ny fampiasana an'ity fizarana Instagram ity ary voila, efa manana ny fantsonao ianao.
Tokony holazaina ihany koa fa tsy horonan-tsary mivantana ireo toy ireo izay efa lasa lavitra tamin'ny 'Tantara'. Ity atiny ity mety manana asa fanitsiana teo aloha sy be pitsiny kokoa fa amin'ny kinova mitsangana. Raha ny marina, toy ny ao amin'ity tambajotra sosialy ity, afaka mamela ny hevitr'izy ireo ny mpampiasa ary azo atao ny mahita hoe firy ny olona nahita izay navoaka, fa ny isa fotsiny, fa tsy ny solonanarana toa azonao jerena ao amin'ny 'Tantara'.
Mazava ho azy, amin'izao fotoana izao dia tsy hanana izany vintana izany ianao amin'ny famoahana ny fahitana, na dia iza aza no mahalala raha amin'ny ho avy, tahaka ny nitranga tamin'ny YouTube dia ho afaka hahita 'Instagramers'mamaly mivantana amin'ny alàlan'ny rafitra miafina toy ny sehatra Google.
Fivarotana vokatra ho an'ny instagram
Instagram dia miasa amin'ny fanavaozana ny zava-dehibe manaraka momba ny varotra vokatra. Fotoana vitsy lasa izay dia hitantsika ny nametrahany rohy mividy, izay tsy dia zava-dehibe loatra ny fampiasana azy. Saingy amin'ity indray mitoraka ity dia tsy ho rohy tsotra amin'ny fivarotana ivelany toy ny teo aloha. Hatao izao rafitra fividianana ao anaty ny fampiharana mihitsy.
Midika izany fa ny mombamomba ireo mpaka sary na mpamorona dia ho afaka mampakatra ny sangan'izy ireo tsy mba hanehoana izany fotsiny, fa mba hahazoana vola miditra aminy mivantana. Ka farafaharatsiny mba nanangonany izany avy amin'ny biraon'ny Zuckerberg -Fizarana Instagram-.
Instagram dia nanjary fomba fifandraisana sy fivarotana mivantana amin'ny mpanjifanao. Raha mampifandray olona arivo na iray alina amin'ny vokatra na hevitra azonao amidy ianao dia manana tsena ianao
Instagram dia mamela ny mpampiasa azy hividy mivantana ao anatin'ny tambajotra sosialy ary mampiasa azy io handoavana ny entana sy serivisy isan-karazany, tena mitovy amin'ny atolotry ny mpifaninana WeChat any Shina. Ity fanavaozana azo atao ity dia tonga taorian'ny famoronana profil iray natokana manokana ho famolavolana Instagram, izay hampiseho ny finiavana avy amin'ny lampihazo hampitomboana ity vondrom-piarahamonina ity. Ny piraofilina toy ny amin'ny tranga hafa dia nataon'i Google, YouTube ary Instagram mihitsy mba hampakatra ny atiny manaitra indrindra amin'izao fotoana izao. Mahatsiarova ny asan'ny mpamorona ho fomba hampitomboana ity fiarahamonina ity amin'ny alàlan'ny mombamomba ofisialy @Design
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Famolavolana tranonkala » Miditra amin'ny tsena rehetra ny Instagram mba hifaninana
Ahoana ny fomba hisafidianana takelaka misy sary ho famolavolana
Ahoana ny fomba hanodinana horonantsary amin'ny solosainao na findainao